What I Share Is How To Share :)
Home Site Map Software Blog E-books
How To Camera ZOOM FX v5.0.6 APK Updated : Mar 7, 2014
** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (15) အမှတ် (11) (10.3.14) အင်တာနက် ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ အင်တာနက် ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် အတွဲ (15) အမှတ် (11)
ဒီနေ့ 10 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသော နေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Credit to - http://www.myanmarinternetjournal.com/
Myanmar Input Method for Android
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာစာကို ကီးဘုတ်မှာမရိုက်ဘဲ Screen ပေါ်မှာ မြန်မာအက္ခရာကို လက်ရေးနဲ့ရေးလိုက်ရုံနဲ့ စာရိုက်နိုင်မယ့် Myanmar Input Method for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Myanmar Input Method for Android
apk ဖိုင် ၂ ဖိုင် ကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Huawei C8816 Offical Firmware Download [Mediafire Download Link]
Huawei C8816 အသစ်ထွက် Phone အတွက် Firmware လေးပါ။
Original မြန်မာစာပါတဲ့ Firmware လေးပါ။
Phone : C8816
Build Number : V100R001C92B174
File Size : 799.75MB
All IPSW Download [Updated]
iPhone,iPad,iPod နှင့် Apple TV Firmware များ Download လုပ်ဖို့အတွက် အောက်က Box မှာ Model နံပါတ်ရွေးပြီးတော့ Go ကိုနှိပ်ပါ။
Download iPod touch firmwares
Download Apple TV firmwares
ကျွန်တော့်ဘလော့ကို Android ဖုန်းမှာဖတ်ဖို့
You Can Send Email To Me :)
အသစ်တင်တိုင်း Email ပို့ပေးပါ့မယ်
အောက်ကအကွက်မှာ email လိပ်စာထည့်ပြီး Subscribe Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်သား အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ gmail အကောင့်အသစ်ဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကသိကအောက် သိပ်ဖြစ်ရပါတယ် .. အကောင့်တစ်...
gmail အကောင့် free ဖွင့်ကြဦးစို့
ကျွန်တော် ဒီနည်းလမ်းကိုConfirm ဖြစ်ဖို့ တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရသလို Confirm ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်း ရေးသင့်မရေးသင့် တော်တော်လေးစဉ်းစား...
Facebook အကောင့် Lock ကျနေသလား ဒီလိုပြန်ယူလိုက်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံသား Facebook User တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်လေး လော့ကျပြီး ဖုန်းနံပါတ် အတောင်းခံရပြီဆိုရင် အဲဒီအကောင့်ကို ဆုံးရှုံးသွားပြီလိ...
Wifi ကို သေချာပေါက် ဟက်လို့ရတဲ့နည်းလေး တင်ပေးစမ်းပါဆိုပြီး email ထဲကို စာပို့တဲ့ mail ပေါင်းလည်း တော်တော်ကို များနေပါပြီ ကျွန်တော်ကလည်း က...
Windows အမျိုးမျိုးကို USB မှ တင်နည်း
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ၀င်းဒိုးကလည်း အသစ်တင်ရတော့မယ် ဒါပေမယ့် CD/DVD Drive ကလည်း မကောင်းတော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ...
မြန်မာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လော့ကျနေတဲ့ အကောင့်ကို Unlock လုပ်နည်း
လော့ကျပြီး ဖုန်းနံပါတ်အတောင်း ခံနေရတဲ့ Facebook အကောင့်တွေကို Unlock လုပ်ရာမှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ... ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်ကို...
gmail မရှုံးအောင် Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်း
ရေးပါများလို့ ဒီလိုပို့စ်မျိုးတွေကို ညည်းငွေ့လာမှာကိုတောင် အားနာမိပါတယ် မရေးလို့လည်း မဖြစ်ပြန်ပါဘူး ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့...
Huawei Y325-T00 Offical Firmware [Mediafire Download]
Huawei Y325-T00 အတွက် Offical Firmware လေးကို Mediafire ကနေ Download လုပ်လို့ရပါပြီ။ Model - Y325-T00 Date - 4.12.2013 Ve...
Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်တိုင်း Lock လော့ကျကျနေတယ်ဆိုရင်
Pinger သုံးပြီး လော့ကျနေသော Facebook အကောင့်ပြန်ယူနည်း
Facebook အကောင့်တွေဟာ အသုံးပြုနေရင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Lock ကျတတ်တာကို Facebook အသုံးပြုနေသူ သူငယ်ချင်းအားလုံးနီးပါး သိကြမှာ...
Advanced Archive Password Recover
All Activator For Adobe Products
CP Speed Up
DLL Files Error
Short Virus Remover
Camera ZOOM FX v5.0.6 APK Updated : Mar 7, 2014
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (15) အမှတ် (11) (10.3.14)
Huawei C8816 Offical Firmware Download [Mediafire ...
ကိုကို မမ တို့အကြိုက် Camera360 Ultimate5ဗားရှင်...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 44 (10.3....
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-45 (10.3.14)
HTC Butterfly S Firmware Android Version 4.4.2
IObit Malware Fighter PRO 2.3.0.203 Multilingual +...
မြန်မာမော်ဒယ်လ်လေးတွေရဲ့ Sexy ကျတဲ့ Update ပုံတြွေ...
Advanced System Optimizer 3.5.1000.15822 Multiling...
mHotspot-Router မလိုပါဘူး wifi ပြန်လွှင့်တဲ့ Softwa...
Avira Antivirus & Internet Security 2014 14.0.3.35...
WonderFox Video Converter Factory Pro v7.4.0.0 + S...
အိုလန်ပစ် ဂိမ်း Android
Malwarebytes Anti-Malware Pro v2.00.0.0504 Full Se...
Netguide Journal Vol (3), Issue (26) (5.3.14)
Computer ပေါ်က Icon တွေမှာမြန်မာလိုရေးဖို.
AnyDVD HD Cracked (ကော်ပီကူးလို့မရအောင် လုပ်ထားတဲ့...
KMSpico 9.0.5.20131111 Final(Win78 8.1 Office 20...
Facebook မှာ အခြားသူတွေရဲ့ Mesage တွေကို ဖတ်ပေမယ့်...
iDevice များ Battery စားသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သေ...
ခွေကနေ ISO ဖိုင်ပြန်ရအောင်အလွယ်ပြောင်းပေးမဲ့ Magic...
Forest HD v1.6 Live Wallpaper [Unlocked] APK
MOGOK Phone Directory v3 (Android)
Keylogger ရန်မှာကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ - Keylogger Dete...
Member ၀င်ထားကြတဲ့ ဘော်ဘော်များ
Google+ မှ ဘော်ဘော်များ
Sharebeast မှ Download ယူနည်း
သူတို့ ဒါတွေ ဖတ်နေကြတယ်